तपाई दुबईमा के गर्दै हुनुहुन्छ? | क्यारियर शिकारले दुबईमा डन'स गर्यो
संसारमा सबैभन्दा भविष्यवादी शहरहरूमध्ये एक हुनुहोस्
22 सक्छ, 2019
तपाई दुबईमा के गरिरहनु पर्छ?
दुबईमा एक नौकरी खोज्दा तपाईं के गर्नुपर्छ?
खैर, जब तपाईं दुबईमा रोजगार खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन तपाईले आवेदन दिनु अघि जान्नु आवश्यक पर्दछ। र निस्सन्देह, हामी सबैलाई थाहा छ पूरा गर्न सजिलो काम छैन। सबैभन्दा गाह्रो कुरा हो आफ्नो दिमागलाई बिन्दुमा राख्न। कहिल्यै तल झर्नु हुँदैन र सफलता दिमागमा सेट अप गर्नुहोस्। इमानदार हुनुहोस् यो लेख्न सजिलो छ। व्यवस्थापन गर्न धेरै गाह्रो।
जबकि तपाईं हुनेछ मध्य पूर्वमा काम खोज्दै, त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन तपाईंले बेवास्ता गर्नुपर्दछ। विशेष गरी यदि हामी दुबई र अबु धाबीमा काम खोज्ने बारेमा कुरा गरिरहेका छौं।
सोच्ने क्षमतालाई हेर्ने क्षमता देख्न सक्ने क्षमता!
प्राय: सामान्य काम खोज गर्नु नपर्ने गल्तिहरु
1। तपाईंको पुन: सुरूमा धेरै जानकारी
निश्चितको लागि क्यारियरको अनुभवले काम गर्दैन पाठ्यक्रम भिटाएमा जब सम्म तपाईं एक काम को प्रस्ताव को लागी सही आवश्यक अनुभव लेख्न। सब भन्दा उत्तम एकले मध्य पूर्वमा सम्भावित रोजगारदातालाई के प्रस्ताव गर्नुपर्दछ भनेर देखाउँदछ।
तपाइँको CV के को बारे मा हुनु पर्छ तपाईं भर्ती वा HR प्रबन्धक प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि यो केवल कुरा मात्र हो कि रोजगारदातालाई लाग्छ। सबैभन्दा नराम्रो कुरा तपाईंको सीभी भनेको रोजगार प्रस्तावमा तपाईले चाहानु भएको कुरा लेख्नु हो। बहुमूल्य अनुभव मात्र समावेश गर्न निश्चित गर्नुहोस्। उदाहरण को लागी, तपाई 34 वर्ष को कार्य ईतिहास को आवश्यकता पर्दैन किनकि तपाईले प्रत्येक समुदायमा c 1 को लागी सिगरेट बेच्न शुरू गर्नुभयो। तपाईको हाईस्कूलको स्नातक तिथि, वा तपाइँ के हो समावेश गर्न आवश्यक छैन तपाइँको बिदा मा गर्न को लागी।
तपाईंको मुख्य प्रतियोगी को हो?
हजारौं व्यक्ति दुबईमा आफ्नै सीवी पठाउँदै। त्यसोभए, सामान्यतया बोल्दै तपाईसँग भर्खरको3सेकेन्ड मात्र हुन्छ भर्तीकर्ता वा एचआर प्रबन्धकमा प्रभाव पार्न। त्यसोभए निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईको सीभी यो राम्रो हो तपाईले एचआर विभागमा पठाउनु भन्दा पहिले।
जो मुख्य मानिसहरू हुन् दुबईमा जागिर खोज्दै भारतीयहरू छन्, पाकिस्तान र ईरानियनहरू। तपाईं पक्का हुन सक्नुहुन्छ कि अधिकांश मध्ये मध्य पूर्व मा एक नौकरी प्राप्त गर्न को लागि चरम रूप देखि काम गरेर रहे हो। प्रायः विदेशी कर्मचारी दुबई जाँच गर्दै छन् सुझावहरूको लागि ब्लगहरू काम खोजमा। र तिनीहरूले रोजगारी प्रस्तावहरू भन्दा धेरै भन्दा छिटो प्राप्त गर्न ज्ञान प्रयोग गर्दै छन् !.
2। कहिल्यै थप्नुहोस् तपाईंको आवरण पत्रमा धेरै जानकारी
दुबईको भाडामा लिने प्रबन्धकहरू र मानव संसाधन विभागका अधिकारीहरू व्यक्तिगत बेवकूफ अनुभव को बारे मा पढ्न आवश्यक छैन। जब तपाईं असफल हुनुभयो वा हाई स्कूलहरूले बार उपलब्धि प्राप्त गर्नुभयो।
तपाईं मात्र राख्न पर्छ कारण किन तपाईं यो काम प्रस्ताव चाहनुहुन्छ। यो तपाईको लागि किन ठूलो हो भन्ने बारेमा कहिले पनि नलेख्नुहोस्। किनभने तपाईं नराम्रो अवस्थामा हुनुहुन्छ र तपाईं सहयोगको खोजीमा हुनुहुन्छ। दुबईमा भर्ती बस यति घृणा।
अर्को कुरा तपाईंको व्यक्तिगत र पारिवारिक अवस्था हो। तिनीहरू पक्कै पनि तपाईका लागि निजी रहनु पर्छ। तपाईंको पुनःसुरुसँगै, हायरि manager म्यानेजर जान्न चाहन्छन् तपाइँ कम्पनीको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ.
तपाइँलाई फोकस गर्न आवश्यक छ?
तपाइँको आवरण पत्र जहिले पनि राख्ने प्रयास गर्नुहोस् मुख्य रूपमा यो काम प्रस्ताव मा केन्द्रित। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले पर्याप्त कार्यकारी अधिकारी हुनुहुन्छ काम को लागी र एक अन्तर्वार्ता योग्य। अर्कोतर्फ, यो निश्चित गर्नुहोस् कि रोजगारदाताहरूले तपाईंलाई विदेशबाट एक बहुमूल्य व्यक्तिको रूपमा फेला पार्नेछन्।
तपाईका विवरणहरू पठाउनु अघि सधैँ समय लिनुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कसरी लक्षित आवरण पत्र लेख्न प्रत्येक रोजगारदाताका लागि। हो, हामी जान्दछौं यो गाह्रो काम हो। तर दुबईमा रोजगार पाउने यो एक मात्र तरीका हो। तपाईको योग्यतालाई सँधै रोजगार प्रस्तावको साथ मिलाउनुहोस्। त्यसोभए भर्तीकर्ताले देख्न सक्दछन् किन तपाईं एक राम्रो उम्मेदवार हुनुहुन्छ.
3। कामको लागि तपाईंका योग्यताहरू बनाउनुहोस्
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ मिल्नुहुन्छ सम्भावित रोजगार प्रस्तावको साथ तपाईंको अनुभव। क्यारियर खोजी हो युएईमा लामो प्रक्रिया। त्यसोभए, वास्तविकतामा, तपाइँको अनुभवलाई वर्गीकृत अनलाइन रोजगारहरूसँग तुलना गर्न लगभग पूर्ण हुन आवश्यक छ। ठीक छ, सामान्यतया बोल्दै, तपाईको अनुभव दुबईमा नजिकको हुनु आवश्यक छ। किनकि मध्य पूर्व र एशियामा हजारौं मानिसहरू छन्।
र हरेक दिन तिनीहरू भर्तीकर्ताहरूलाई आफ्नै सीभी पठाउँदै छन्। त्यसो भए, सकेसम्म नजिक अनुभव प्राप्त गर्न कोशिस गर्नुहोस्। र निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँको अनुभव काम र एक उम्मेद्वारको रूपमा तपाइँ बीच मिल्छ।
के महत्त्वपूर्ण छ?
समय र प्रयास लिन यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ विशेष गरी दुबई जस्ता व्यस्त ठाउँमा। र बिस्तारै रोजगारी प्रस्तावहरूको खोजी गर्दै जुन तपाइँको योग्यतालाई कार्य वर्णनसँग मिल्दछ।
हाईरि manager्ग म्यानेजर देखाउन यो तपाईमा निर्भर छ किन तपाईं कामका लागि उपयुक्त हुनुहुन्छ। अनुमानलाई समीकरण बाहिर छोड्नुहोस्।
4। साक्षात्कार पछि एक मिनेट पछि नौकरी लिन तयार छ
खैर, अर्को गल्ती कि तपाईं मात्र दुबई मा एक रोजगार साक्षात्कार को लागी अनुपयुक्त ड्रेसिंग गर्न सक्नुहुन्छ। यो देश अवश्य पनि एक मुस्लिम देश हो, तर व्यापारको नीति यस देशमा राम्रोसँग काम गर्दछ।
ओभरराइड गर्न प्रयास गर्नुहोस् साक्षात्कार प्रक्रियामा। किनकि त्यसले तपाईंलाई बेवकूफ जस्तो झैं चोट पुग्न सक्छ। पहिले तपाइँले बैठकमा आमन्त्रित गर्नुभयो कम्पनी र कार्य वातावरण मा केहि अनुसन्धान गर्न को लागी प्रयास गर्न।
के तपाईं अरूलाई ईमानदार रायको लागि सोध्न सक्नुहुन्छ?
के तपाइँ संगठनमा कसैलाई थाहा छ तपाइँ भर्खरै लागू गर्नुभयो ?. यदि लिंक्डिन प्रयोग गर्नुहुन्न भने र पोशाक कोडका लागि त्यहाँ काम गरिरहेका मानिसहरूलाई सोध्नुहोस्। त्यसोभए, यदि तपाइँ विवरणहरूको बारेमा निश्चित हुनुहुन्न अरूलाई विचार दिनुहोस् यो सरल र प्रभावी छ। अरूलाई के सोध्नुहोस् जुन उनीहरूले दैनिक आधारमा लगाइरहेका छन्। त्यो पहिलो कुरा हुनेछ भाडामा लिने प्रबन्धक दुबईमा ध्यान दिनेछ.
5 एक नौकरी साक्षात्कारमा गलत कुरा बताउँदै
पाँचौं बिन्दु सबै कुरा सही कुरामा सही भन्नु भएको छ। जब तपाइँ भर्खरै पुनः सुरु र आवरण पत्रको साथ आवेदन गर्नुभयो। दुबई बाट एक भर्ती यसको बारेमा केही विचार हुनेछ तपाईं को हो र जीवनयापनको लागि के गर्नुहुन्छ.
60% भन्दा बढि खराब प्रकारको बोल्ने विवरणहरू। भन्न सकिदैन, त्यो उत्तम छ तपाईंलाई अनावश्यक नकारात्मक छोड्नु पर्छ काम साक्षात्कार को समयमा विवरणहरू। उदाहरण को लागी, तपाईको व्यक्तिगत वा ब्यापार क्यारियर विकासको बखत असफल हुन्छ। वा अर्को तर्फ, तपाईको अनुभवमा केहि महिनाको अन्तर छ.
तपाईलाई फोकस गर्न आवश्यक छ?
अन्तर्वार्ता तपाईको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारे सबै हुनुपर्दछ कम्पनी यदि तपाईंलाई काम प्रस्ताव गरिएको थियो। कौशल र योग्यताहरू साझेदारी गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई स्थितिको लागि आदर्श व्यक्ति बनाउँदछ। तपाईले दुबईमा के गर्नु पर्छ?
एक खेल बनाउनमा आफूलाई केन्द्रित गर्दै तपाईं र रोजगार प्रस्ताव बीचमा। अर्कोतर्फ, धेरै धेरै तरिकाले यसो भन्दै तपाईंलाई जागिरको लागि उम्मेदवार विकल्पको बाहिर दस्तक दिन सक्छ।
6 स्टप - संयुक्त अरब अमीरात मा साक्षात्कार गल्ती
संयुक्त अरब एमिरेट्स छन् कुनै पनि देश भन्दा राम्रो तरिका। र निश्चित रूपमा दुबई, अबु धाबी वा शारजा तपाईं एक साक्षात्कार हुनेछ कि बस काम गर्दैन।
कहिलेकाँही, यो केवल हुनुको मतलब थिएन, र तपाईंको अनुभव यो रोजगार प्रस्ताव को लागी सही तरीका हो। जहाँ सम्म तपाईं एक अन्तर्वार्ता पारित गर्न को लागी प्रबंधित गर्नुहुन्छ र तपाईंले यो युएईमा उडाउनु भएको छैन।
जे होस्, त्यहाँ केहि साक्षात्कार र सामान्य गल्तीहरू छन् कि सजीलै अपहेलना योग्य छन्। उदाहरण को लागी, ढिला नगर्नुहोस्, एक कलब्याक को लागी कहिले पर्खनु छैन। यो कल तरिका कल गर्न को लागी राम्रो छ सम्भावित भर्तीकर्ता र उसलाई तपाईं काम चाहानुहुन्छ भनेर देखाउँदछ।
7 तपाईलाई संयुक्त अरब अमीरातबाट सन्दर्भहरू निश्चित गर्नुहोस्
तिनी हरु मध्ये दुबईमा रोजगार पाउने महत्वपूर्ण विवरण। तपाईको CV मा दुबईमा आधारित संगठनबाट केवल सन्दर्भहरूको एक सेट छ। र सम्पर्क विवरण दिन सँधै तयार रहनुहोस् जब तपाइँ काम खोज गर्दै हुनुहुन्छ.
मानव संसाधन प्रबन्धकहरू तिनीहरूका प्रत्येकको नजरमा जाँदैछन्।
तपाईले गर्न नचाहेको नराम्रो केस भनेको अन्तिम मिनेटमा तपाईको पूर्व व्यवस्थापकहरू लिनु हो र उनीहरूलाई तपाईलाई क्रेडेन्शियल प्रदान गर्नु आवश्यक छ भनेर बताउनु भनेको कति राम्रो र तपाईं कती बलियो काम गर्न सक्नुहुन्छ।
सुरुमा तपाईको मानव संसाधन विभागलाई कल दिनुहोस्। त्यसो भए रेफरन्सको सूची निर्माण गर्नका लागि तयार तर केवल संयुक्त अरब अमीरात कम्पनीहरूबाट। तपाईले दुबईमा के गर्नु पर्छ? तपाईंको आफ्नै विकल्प खुला राख्नुहोस् र कहिल्यै पुलहरू जलाउनु हुन्न। तपाईंलाई कहिले पनि थाँहा हुँदैन जब तपाईंलाई तिनीहरूको आवश्यक छ।
8 अन्तर्वार्ता पछि पछ्याउन बिर्सने
अर्को नराम्रो व्यवहार हो जागिरको अन्तर्वार्ता पछि पछ्याउँदैन। केहि केसहरूमा तपाईंलाई काम पाउन मद्दत पुर्‍याउँछ। उदाहरण को लागी, यो तपाइँ को लागी तपाइँको बारेमा सम्झाउने को लागी एक अर्को मौका दिनेछ र राम्रो प्रभाव पार्न.
दुबईमा भर्तीहरू मन पराउँछन् तिनीहरूको समय र प्रयासको लागि सराहना गर्न। त्यसोभए, चलाखीसाथ ईमेलले तपाईंलाई अन्तर्वार्ताको एक दिन पछि ईमेल गर्दछ। पक्कै पनि तपाईंलाई देखाउने राम्रो तरिका हो समय र अवसरको कदर गर्नुहोस् जुन तपाईंले प्रबन्ध गर्नु भएको छ.
पछ्याउँनाले तपाईंलाई फेरि केहि थप्ने अर्को मौका दिन्छ महत्त्वपूर्ण कुरा जुन तपाईंले बिर्सनुभयो। उदाहरण को लागी, केहि तपाइँ जुन तपाइँ तपाइँ साक्षात्कार को लागी भन्नुभएको थियो। Xyz कम्पनीको साथ तपाइँको अनुभव मनपराउनुहोस्। वा थप प्रमाणपत्र यसले उनीहरूलाई बोर्डमा लैजान निर्णय गर्न मद्दत गर्दछ.
9 नकारात्मक प्रतिक्रियाको साथ तपाईंको काम छोडेर
दुबई मा प्रायः तिनीहरू सोच्दैनन् सही तरिकामा। खैर, तपाईले दुबईमा के गर्नु पर्छ? कम्पनी को बारे मा केहि नराम्रो भन्नु छैन जब तपाईं बस्नुहुन्छ.
किनकि यसले तपाईको कुराले फरक पार्छ निगमबाट बाहिरको बाटोमा। र निश्चित रूपमा प्रबन्धकहरू, त्यहाँ अझै तपाईं सम्झना छन्। त्यसो भए तपाईको बारेमा राय लामो अवधिमा फरक पर्दछ।
उदाहरण को लागी, सम्भावित भर्तीकर्ताहरु सामान्यतया अन्तिम3बाट6नियोक्ताहरु मा सन्दर्भ जाँच गर्दछ। त्यसो भए, यदि तपाईंले तपाईंको अन्तिम काम छोड्नुभयो भने नराम्रो नोटमा। र त्यहाँका ब्यवस्थापकहरूले तपाईंलाई एक धोखाधडी गरेको भन्नेछन् यो तपाइँलाई भेट्न आउन सक्छ। त्यसो भए, तपाईको दिमाग प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस् र भावना अध्ययन गर्नुहोस्। यसबाहेक, कहिले पनि भन्नुहोस् तपाईंको पूर्व कम्पनी त्यो गल्ती थियो।
10 तपाई दुबईमा बाँच्न के गर्दै हुनुहुन्छ?
तपाईको दिमागलाई सँधै ठीक तरीकाले राख्न कोसिस गर्नुहोस्। कहिल्यै धोखाधडी गर्न कोसिस नगर्नुहोस्। उत्तम तरिका, इमान्दार हुनु, र लक्ष्यमा पुग्न कडा परिश्रम गर्दै। दुबई एकदम कडा देश हो जुन कुनै आपराधिक गतिविधिलाई अनुमति दिदैन। यसका साथै कुनै पनि नराम्रो निर्णयले तपाईंलाई समस्यामा पार्छ र तपाई एकमा आउँछ दुबईको स्थानीय जेल वा तपाईंलाई तपाईंको आफ्नै मातृभूमिमा निर्वासित गरिनेछ। यो एक तथ्य हो, र यो तपाइँलाई लागु हुनेछ।
कार्य गर्ने क्षमता भन्दा अगाडि सोच्न सक्ने क्षमता ...
स्मार्ट चाल हुनेछ तपाईंको सपनाको काम उपलब्ध गराउनुहोस्!
त्यो दिमागमा, भारतीय र पाकिस्तानी युएईमा रोजगारी खोज्दैछन्। त्यसो भए, दैनिक गहन प्रतिस्पर्धाको साथ, यी कार्यहरू असम्भव देखिन्छ। तर वास्तविकतामा यो केवल एक शब्द हो।
त्यसोभए, आफैंलाई पाउनुहोस् र घटनास्थलमा केहि रोजगार अन्तर्वार्ता सेट अप गर्नुहोस्। अब तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईं दुबईमा के गर्न सक्नुहुन्न। तपाईको क्यारियरको खोजी को लागी एक कार्य को योजना को लागी अब समय हो। सीभी र कभर पत्र पालिश र राम्रोसँग लेखिएको हुनुपर्दछ।
एक अन्तर्वार्ता कसरी सेट अप गर्ने? केवल यो गर्नुहोस्!
तथापि, धेरै मूल्यहरू, राम्रा अनुभवी प्रबन्धकहरू पनि दक्षिण अफ्रीकाबाट र Filipinos। केही समय मध्य मध्य व्यापारमा एक सभ्य साक्षात्कार प्राप्त गर्न गाह्रो लाग्छ।
तपाईंलाई चाहिन्छ दुबईका केही गल्तीहरू हटाउन। किनभने त्यसले तपाईको वास्तविकता रोजगारीको स्थिति सुरक्षित गर्न को लागी एक विकल्प पाउन को संभावनाहरु कम गर्नेछ। र निश्चित रूपमा तपाईको स्कोरिंगको लागि यो अवसर कम गर्नुहोस् विशेष प्रबन्धन रोजगार प्रस्ताव।
हामी सधैँ सुनिश्चित गर्न प्रयास गर्दै छौं विदेश बाट काम गर्ने चाहनाहरु। त्यो एउटै नियम दुबईमा प्रत्येक एक्सटेटका लागी आवेदन गर्दछ। र मध्य पूर्व निश्चित रूपमा एक राम्रो स्थान हो जुन तपाईंको भविष्यको लागि पर्खाइरहेको छ।
त्यसैले, यदि तपाईं पछ्याउनुहुन्छ संयुक्त अरब अमीरात योग्य नियमहरू। तपाईंले दुबई वा अबु धाबीमा रोजगारी पाउनु पर्छ। र सँधै तपाईंको सपनाको जागिर, वास्तविकता बनाउने प्रयास गर्नुहोस्। कुनै किसिमको खराब जस्तो देखिन्छ। गड्ढाबाट बच्न कोसिस गर्नुहोस्। र अन्तिम सास लड्न।
कस्ता प्रविधिहरू भर्खरै स्नातक विद्यार्थीको रूपमा प्रयोग गर्छन्?
सबैभन्दा खराब स्थितिमा ताजा एमबीए अनुभवका साथ स्नातक विद्यार्थीहरू। यसले सबै युवा विद्यार्थीहरूको लागि अवसर नभएको किन कुनै पनि अर्थ राख्दैन दुबईमा रोजगार पाउने.
सबैभन्दा कान्छो रोजगार खोज्नेहरूले उनीहरू पछि यो ठूलो thisण प्रदर्शन गर्ने प्रयास गर्नेछन् विश्वविद्यालयबाट स्नातक। र तिनीहरू आफैंले छोडिनेछ। त्यसोभए, वास्तविकतामा, तिनीहरूले सबैभन्दा बढी पैसा बनाउनु पर्छ।
दुबईको रोजगार बजारमा नयाँ व्यक्तिको रूपमा। तपाईंले कम सुरु गर्न आवश्यक छ, सोच्नुहोस् कि तपाईं एक शिक्षित व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईंले बिस्तारै कर्पोरेट संसारमा माथि सर्न आवश्यक छ। त्यहाँ-त्यहाँ कुनै अपवाद छैन। दुबईमा काम पाउनको लागि जुनसुकै व्यक्ति अध्ययन गर्न चाहे जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि हो।
दुबईमा प्रबन्धकको रूपमा कस्ता प्रविधिहरू प्रयोग गर्छन्?
राम्रो अनुभवी व्यक्तिहरू धेरै विकल्पहरू छन्। तर संयुक्त अरब अमीरातमा त्यहाँ मुँहको संसार हो र एउटा नम्बरको रूपमा जडान छ जसले तपाईंलाई व्यवस्थापन स्तरमा नौकरी प्राप्त गर्न दिन्छ।
तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ कि यो अनुचित छ तपाईंको लागि एक एक्सपेटको रूपमा। तर तपाईं आफ्नो कम्पनीलाई तपाईलाई थाहा छैन व्यक्तिलाई दिनुहुन्छ ?. त्यसैले, दुबईको एक राम्रो ठाउँ हो तर त्यहाँ एउटा नियम हो जुन तपाईंले पछ्याउनु पर्छ। र यदि तपाईं एक गलत व्यक्ति भाडामा लिनुहुन्छ र उहाँ गल्ती गर्नुहुन्छ।
दुर्भाग्यवश, यो एक मजेदार गलती हो र कानूनी रूपमा उहाँले यसलाई ठीक गर्न जिम्मेवारी छ। र धेरै अवस्थामा यो धेरै तनाव ले रहेको छ र एकदम धेरै पैसा र निश्चित रूप केही महिनाको समय।
निष्कर्ष - तपाई दुबईमा के गर्दै हुनुहुन्छ?
दुबईको क्या क्यारियर खोज्दै धैर्य र दृढताको सेट चाहिन्छ। त्यसोभए, सामान्यतया बोल्दै, सबैले आशिष् पाउनको लागी सबैलाई आशिष् पाउनेछैनन् स्मार्ट शहर। आशा छ तपाईंले दुबई सिटी कम्पनीबाट केही सुझावहरू पाएका छौं। र तपाई दुबईमा आफ्नो सपना रोजगारी प्राप्त गर्न तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहुनेछ।
सँधै तपाईको पाठ्यक्रम कक्षा Vitae अद्यावधिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईंको आवरण पत्र विशेष गरी नौकरी प्रस्तावको लागि बनाइदिनुहोस्। CV लाई नियमित आधारमा पठाउनुहोस् र सम्भावित नियोक्ताहरूलाई CV पठाउन अघि विज्ञापन विज्ञापन अनुभव जाँच गर्नुहोस्।
ठीक छ, मानिसहरु CV मा धोखा गर्न सक्षम थिए। तर त्यो समय अन्त्यमा आउछ। अब एक साधारण पृष्ठभूमि जाँच लगभग हरेक कार्यकारी संग गरिन्छ। त्यसोभए, यदि तिनीहरूले जाँच गर्छन् कि यसले राम्रो भन्दा बढी हानि गर्नेछ। र दुबईमा, तपाईंको ईमानदारीपूर्वक एक पतली रेखा हो।
तपाई के गर्नु हुनाले संयुक्त अरब अमीरात मा नौकरी प्राप्त गर्न को लागी?
तपाई जानु अघि!
तपाई जानु अघि तपाई के गर्नु पर्छ !. कार्य अवसरहरूको सूचीहरू तल पाउनुहोस् र एक एक को लागी आवेदन गर्नुहोस्। राम्रो कार्यहरूको लागि तपाईंले मात्र वैध कामकाज साइटहरूमा आवेदन गर्नु पर्छ।
स्क्याम सल्लाहकार जाँच गर्नुहोस् र सम्बन्धित कम्पनीको बारेमा राम्ररी ज्ञान छ। महत्त्वपूर्ण सम्पर्कहरू वा सन्दर्भहरू प्राप्त गर्ने क्रममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। अनलाइनलाई सामाजिक र अधिक जागिरको लागि औपचारिक कार्यक्रमहरूमा।
त्यसोभए, वेबसाइटमा जानुहोस् र वेब ठेगाना थप गर्नुहोस्। तपाइँ यी कम्पनीहरू अनलाइन जाँच गर्न गाह्रो भेट्टाउँछन्। तपाईंले यी कुनै पनि भर्नाहरू तिर्न विचार गर्नुपर्दैन। तिनिहरु मध्ये केहि तपाईले तपाइँको तर्फबाट काम पाउन सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तर सौभाग्य देखि, यिनीहरु मध्ये अधिकांश मात्र घोटाला कम्पनीहरु हो।
माथि उल्लेखित सबैलाई विचार गर्नुहोस्!
दुबई र नौकरी खोज स्पष्ट रूप देखि व्यवस्थापन गर्न एक कठिन सौदा हो। धेरै बाधा र हजारौं, निस्सन्देह, आफ्नो सपना नौकरी पत्ता लगाउन शायद यो पनि लायक छैन।
तपाईं केहि आधारभूत कौशल जस्तै ग्राहक सेवा आयोग आधार अवसरों संग काम प्रस्तावहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। यद्यपि, तपाईंको सपनाको स्थिति प्राप्त गर्दै दुबईमा सुरुमा सम्भव नहुन सक्छ। त्यसोभए, सुरुमा कुनै पनि नौकरी प्रस्ताव प्राप्त गर्न प्रयास गर्नुहोस् र धीरे-धीरे एक कर्पोरेट स्तरमा जानुहोस्। त्यसोभए दुबईमा के गरिरहनु पर्छ? निश्चित रूपमा तपाईंको गधा अर्को चरणमा जानुहोस्। कट्टर नौकरी खोजी र नैतिक काम गर्नुहोस्। अरबी सपनाको बारेमा सपना देख्न रोक्नुहोस्।